IChippa neBay abakawanikwa amaphuzu eRoyal AM: owePSL
Kusangenzeka iChippa United neRichards Bay bagcine bengawatholanga amaphuzu obekuthiwa bawacoshe phansi ngemuva kokungafiki kweRoyal AM emidlalweni yokuhlunga.
IRoyal AM yenqabile ukudlala imidlalo yokuhlunga iqembu elizongena kwiDStv Premiership ngesonto elidlule, ithi yona isafuna kuphethwe udaba elufake enkantolo kuqala.
Yathi iPSL yephula umthetho ngokuqhubeka nale midlalo ngoba yona inencwadi yenkantolo ethi ayimise le midlalo kuze kuphele amacala.
IPSL yaphikelela ngokuthi iqhubeke umdlalo. NgoLwesibili iRoyal AM yenza ezibukwayo ifika enkundleni eChatsworth Stadium la kwakufanele idlale khona neChippa.
Kodwa kwathi sekusondele isikhathi sokuthi kungenwe enkundleni, yabuyela ebhasini yashaya yachitha. NgoLwesine bekumele idlale neRichards Bay, kodwa yavele yangafika kwasenkundleni njengoba yayizidlalela umdlalo wobungani ngaleso sikhathi.
Bekukholakala ukuthi njengoba iRoyal AM igingqelwe nje, kusho ukuthi lamaqembu agingqile azichoshele amaphuzu kalula. Kodwa umshushisi wePSL, uNande Becker uthi kusazoqalwa phansi uhlelo lokuyiqondisa izigwegwe kuqala.
“Ngisazofunda yonke imibiko (yonompempe) bese, kuya ngokuthi ngitholani, ngihlonze ukuthi sizobabeka liphi icala,” ucashunwe esho kanje uBecker kwiCity Press ngeSonto.
“Kumele ngibheke lonke ulwazi olukhona ngaphandle kokwenzelela nginqume ukuthi kumele yini sibabeke icala. Kumele ngibheke namacala ajade ekhona ukuze ngibone ukuthi kungenzeke yini ukuthi yiwo ayenze ukuthi ingayo emidlalweni.
“Ayikho le yokuthi iqembu eligingqile liwiniswa ngo 3-0. Kumele udaba luqale lubhekwe yisigungu esiqondisa izigwegwe bese sinquma ngokuyikhona esikubona kuyinhlawulo efanele ngalelo cala.
“Kungenzeka isinqumo sithi awuqalwe phansi umdlalo noma bephucwe amaphuzu. Isibonelo nje ecaleni leCape United, umdlalo wanikwa iCape Town Spurs kodwa ayanganikwa amagoli,” kusho uBecker.
Ngokohla lwemidlalo olukhishwe yiPSL, iRoyal AM kufanele idlale neRichards Bay ngoMsombuluko ntambama, bese iqeda imidlalo yokuhlunga kwiChippa ngoLwesithathu.
Akucaci nokho ukuthi izoya yini kule midlalo njengoba beyigolozile kweyokuqala emibili. IChippa beyizibona ihlezi phezulu futhi beyisizisindisile ezembeni. Kodwa uma kugcina kunqunywa ukuthi umdlalo uqalwe phansi, kuzosho ukuthi kusamele iwasebenzele amaphuzu.
FUNDA NALA: UKomphela uzonyuselwa kwesokuphatha abaqeqeshi kwiSundowns
IRoyal AM isafake isicelo sokunikwa imvume yokuphikisa isinqumo senkantolo esabeka iSekhukhune United njengompetha beGladAfrica Championship. ISekhukhune yanikwa amaphuzu aphucwa iPolokwane City ngumehluleli ozimele. Lokhu kwayenza yabe seyiqeda iphezulu.
Inkantolo ephakeme yaseGoli yasigcizelela lesi sinqumo yathi sifanele futhi yaphoqa iPSL ukuthi imemezele iSekhukhune njengompetha.
Previous Previous post: BUKA!: Amabhola anzima avinjwe u-Akpeyi weChiefs koweCAF
Next Next post: ULamati usefuna ukudubulana nompetha kuphela manje